Apple Watch | Mey 2022
iphone tsy mandefa sary amin'ny android
iphone 6s dia tsy mamaly
iphone tsy afaka mandre raha tsy amin'ny mpandahateny
mozika iphone 5 tsy mandeha
Fa maninona no maty tampoka ny bateria Apple Watch? Ity ny The Fix!
Nanazava ny manampahaizana iray momba ny iPhone ny antony mahatonga ny bateria Apple Watch ho faty haingana ary manome sosokevitra maro azonao ampiasaina hanitarana ny androm-piainany!
Tsy handeha ny Apple Watch! Ity ny The Real Fix.
Ny manam-pahaizana momba ny iPhone dia manazava ny antony tsy handehanan'ny Apple Watch anao ary hampiasa torolàlana momba ny famahana olana mba hampisehoana aminao ny fomba hamahana ilay olana.
Nanazava ny manampahaizana iray momba ny iPhone ny antony tsy hamerenan'ny Apple Watch anao sy hampiasa torolàlana iray hanarahana azy hanoroana anao ny fomba hamahana ilay olana ho tsara!
Tsy mahazo fampandrenesana amin'ny Apple Watch? Ity ny vahaolana.
Ny manam-pahaizana momba ny iPhone dia manazava ny antony tsy ahazoanao fampandrenesana amin'ny Apple Watch anao ary asehony anao ny fomba fanamboarana io olana io.
Apple Watch Mijanona Amin'ny Logo Apple? Ity ny The Fix!
Ny manam-pahaizana Apple dia manazava ny antony mahatonga ny Apple Watch miraikitra amin'ny logo Apple ary mampiseho aminao ny fomba fanamboarana ny olana amin'ny alàlan'ny torolàlana tsikelikely.
Ny Apple Watch dia tsy hanavao! Ity ny The Real Fix.
Ny manam-pahaizana momba ny iPhone dia manazava ny antony tsy hanatsarana ny Apple Watch anao sy hampiseho aminao ny fomba fametrahana ny watchOS farany amin'ny Apple Watch anao.
Tsy hiaraka amin'ny Apple Watch ve ny iPhone? Ity ny The Fix!
Manazava ny manampahaizana iray ny antony tsy hiarahan'ny iPhone miaraka amin'ny Apple Watch anao ary asehony anao ny fomba fanamboarana ny olana amin'ny alàlan'ny torolàlana momba ny famahana olana.
Apple Watch Tsy miakatra famandrihana? Ity ny The Real Fix!
Nanazava ny manampahaizana iray momba ny iPhone ny antony tsy mampandoavam-bola ny Apple Watch anao ary asehony anao ny fomba fanamboarana ny olana amin'ny alàlan'ny torolàlana iray isaky ny dingana.
Ahoana ny fomba hanidiana ny apps amin'ny Apple Watch: ny tena làlana!
Ny manam-pahaizana Apple dia mampiseho aminao ny fomba fanidiana ny app amin'ny Apple Watch ary hanazavany ny tombony azo amin'izany amin'ny fiainanao bateria Apple Watch.
Apple Watch Stuck Verifying Verifying Update? Ity ny The Fix!
Manazava ny manampahaizana iray ny antony mahatonga ny Apple Watch anao mikatona amin'ny fanamarinana fanavaozam-baovao ary asehony anao ny fomba fanamboarana ny olana amin'ny fanarahana torolàlana iray.
Ny manam-pahaizana momba ny iPhone dia manazava ny antony tsy mandeha ny Apple Watch Bluetooth ary asehony anao ny fomba fanamboarana ny olana amin'ny alàlan'ny torolàlana fitadiavana vahaolana isaky ny dingana.
Ny manam-pahaizana momba ny iPhone dia mamaly fanontaniana lehibe momba ny Apple Watch: tsy mahazaka rano ve izy ireo sa mahatohitra rano? Misy mahasamihafa ny Series 1, 2, 3?
Ny Apple Watch dia mampiseho ny ora fotsiny! Ity ny The Real Fix.
Nanazava izay tokony hatao ny manam-pahaizana momba ny iPhone raha tsy mampiseho ny fotoana fotsiny ny Apple Watch hahafahanao manamboatra ny olana ary miverina manao izay mahatonga ny famantaranandron-tsainao ho hendry.
Ny Apple Watch Froze! Ity ny The Real Fix.
Manampy anao hamantatra ny tena antony mahatonga ny Apple Watch hivaingana ny manam-pahaizana Apple iray ary mampiseho aminao ny fomba hamahana ilay olana ho tsara.
Tsy ho faty ny Apple Watch! Ity ny The Real Fix.
Ny manam-pahaizana momba ny iPhone dia mampiseho aminao izay tokony hatao raha tsy hihena ny Apple Watch amin'ny alàlan'ny torolàlana fitadiavana vahaolana tsotra.
AirPods Tsy hifandray amin'ny Apple Watch? Ity ny The Real Fix!
Ny manam-pahaizana momba ny iPhone dia manazava ny antony tsy hifandraisana amin'ny Apple Watch ny AirPods anao ary asehony anao ny fomba fanamboarana ny olana amin'ny alàlan'ny torolàlana iray isaky ny dingana.
Ahoana no fomba hamonoako ny famantaran-tanana amin'ny Apple Watch? The Fix!
Ny manam-pahaizana momba ny iPhone dia mampiseho aminao ny fomba famonoana ny Detection Wrist amin'ny Apple Watch ary manazava ny zava-mitranga rehefa manidy ity fikafika ity ianao.
Apple Watch Tsy Mihovotrovotra? Ity ny antony & The Fix!
Manazava ny manampahaizana iray momba ny iPhone ny antony tsy mihetsiketsika mihitsy ny Apple Watch anao ary asehony anao ny fomba fanamboarana io olana io indray mandeha!
Nijanona kely ve ny fanavaozana Apple Watch? Ity ny The Fix!
Manazava ny manampahaizana iray ny antony mahatonga ny fanavaozana Apple Watch anao mikatona amin'ny 'Miato kely' ary mampiseho aminao ny fomba fanamboarana ny olana amin'ny alàlan'ny torolàlana fitadiavana vahaolana isaky ny dingana.
Ahoana ny fampidinana fampiharana amin'ny Apple Watch: Ny torolàlana feno!
Ny manam-pahaizana momba ny iPhone dia mampiasa torolàlana isan-tsehatra hanoro anao ny fomba fampidinana fampiharana amin'ny Apple Watch fomba telo samy hafa amin'ny fampiharana iPhone's Watch.